China Ibhokisi epholileyo yeplastiki mveliso kunye nabathengisi | Huizhou
Ipakethe yeGel Ice
Ipakethe ye-Inaliti yamanzi
Ipakethe yeHydrate Ice
Ipakethe ebandayo yangoku
Xa igqunyiwe Bag
Liner Box zigqunyiwe
Zokuvala Box Ibhokisi
Iziko leR & D
Ipakethe ye-Ice Hydrate eyomileyo
Ibhokisi yePlastiki epholileyo
Ibhokisi epholileyo ye-EPP
Ibhokisi epholileyo yeVIP
Ibhokisi ebandayo yeHDPE, ekwabizwa ngokuba yibhokisi yokupholisa yeplastiki, yibhokisi epholileyo yokugquma engenamandla ombane asetyenziswa kwibhokisi epholileyo efana nefriji. Iibhokisi zethu ezipholileyo ezinobungakanani obahlukeneyo kunye nemilo, zihlala zisetyenziselwa ukutya namayeza ahambelana nokuhanjiswa kwetyathanga elibandayo, njengokutya okutsha, ukutya okanye isampulu yamayeza, njl.
IHDPE (Ukuxinana okuphezulu kwePolyethylene) Ibhokisi epholile
1.Ibhokisi epholileyo yeHDPE, ekwabizwa ngokuba yibhokisi yokupholisa yeplastiki, yibhokisi epholileyo yokugquma engenamandla ombane asetyenziswa kwibhokisi epholileyo efana nefriji. Iibhokisi zethu ezipholileyo ezinobungakanani obahlukeneyo kunye nemilo, zihlala zisetyenziselwa ukutya namayeza ahambelana nokuhanjiswa kwetyathanga elibandayo, njengokutya okutsha, ukutya okanye isampulu yamayeza, njl.
I-2.HDPE (i-High Density Polyethylene) izinto zizinzile ngokwemichiza yamandla aphezulu kunye nokuqina. Ngenxa yobume be-HDPE ekhethekileyo, ibhokisi yethu ye-HDPE epholileyo yomelele kakhulu, yomelele ngakumbi kwaye iyanyamezela umhlwa ukuqinisekisa ukuthunyelwa kwakho kuzinzile.
3. Ngokusisiseko ibhokisi epholileyo yenziwe ngamanqanaba amathathu (ngaphakathi, phakathi, ngaphandle) ukukhusela kakuhle ukupholisa okanye ubushushu ekudluliseleni ngaphandle nangaphandle kwebhokisi. Icandelo eliphakathi lobushushu lidlala indima ephambili ekukhuseleni ngaphakathi kwilizwe langaphandle elinama-coefficients ahlukeneyo e-thermal conductivity, zii-PU kunye ne-EPS. Kwaye izinto zangaphakathi, sinikezela nge-PP, i-PS kunye nezinto ze-PE ngeendlela ezahlukeneyo zokubumba.
Sikwabonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zezinto ezinokuguquguquka ezinjengelokhi, ihenjisi kukhetho lwakho.
I-1.HDPE ibhokisi epholileyo yenzelwe ukuba iqulethe iimveliso njengesikhongozeli kunye nokuthintela izinto eziqulathiweyo kubanda nomoya oshushu otshintshisanayo okanye oqhubayo nehlabathi langaphandle. Yibhokisi epholileyo yesayizi enkulu kunye nomsebenzi we-thermal.
Kwimihlaba yokutya esandula ukwenziwa, zisetyenziselwa ukuhambisa ukutya okutsha, okonakalayo kunye nobushushu, njengoku: inyama, ukutya kwaselwandle, iziqhamo kunye nemifuno, ukutya okulungiselelwe, ukutya okungumkhenkce, i-ayisi khrim, itshokholethi, iilekese, iikeyiki, iikeyiki, itshizi, iintyatyambo, ubisi, njl.
3.Ukufaka isicelo se-pharmacy, iibhokisi ezipholileyo zihlala zisetyenziselwa ukuthunyelwa kwe-reagent ye-biochemical, iisampulu zonyango, ichiza lezilwanyana, iplasma, isitofu sokugonya, njl njl.
Ngelo xesha, zikulungele ukusetyenziswa kwangaphandle kunye ne-gel ice pack okanye isitena seqhwa, gcina ukutya okanye ukusela kubanda xa uhamba intente, inkampu, iipiknik, ukuhamba ngephenyane kunye nokuloba.
Ubungakanani bangaphandle （cm）
Ubude * ububanzi * ukuphakama
umaleko wokugquma ubushushu
27 * 20.5 * 17.5
36 * 25.6 * 38
41.2 * 29.8 * 43
60 * 48.9 * 36.7
I-64 * 52 * 37.5
105 * 45 * 48
Qaphela: Iinketho ezingaphezulu ezikhoyo ziyafumaneka.
1.Non izinto eziyityhefu kunye nendalo.
2.Featuring conductivity thermal eliphezulu ukugcina abandayo ngaphakathi ibhokisi kupholile
Akukho mandla ombane afunekayo, ukuthuthwa ngokulula
Isithuba se-4 esikhulu sokubamba izinto ezininzi kwibhokisi epholileyo.
5.Strong ngokwaneleyo ukuba isetyenziswe rhoqo.
I-6.Ibalaseleyo ekuhanjisweni nasekuhanjisweni kokutya okutsha, isidlo esilungisiweyo kunye namayeza.
7.Uhlala ixesha elide kwaye ucocekile ngokulula.
Ubungakanani bebhokisi epholileyo kukhetho olubanzi ukuze zisetyenziselwe inkampani ephetheyo ukuhambisa iimpahla kunye namayeza okanye yangaphandle yomntu imisebenzi.
2.Ibhokisi epholileyo yomelele ukwenzela ukuba isetyenziselwe ukuhambisa iimveliso zisuka kwenye indawo ziye kwenye amaxesha amaninzi.
3.Khetha eyona nto ilungileyo yokulinganisa ubushushu kumaleko ophakathi ngokusekwe kwinjongo yakho ethile.
Zomelele ngokwaneleyo ukuba zisetyenziswe ngokuphindaphindiweyo.
Egqithileyo Ibhokisi epholileyo ye-EPP
Okulandelayo: Ingxowa yeThermal
+ 86-021- 5106 1506
Igumbi 1103, Ukwakha B, Baolong Square, No.590, Huijin Road ， Qingpu, Shanghai, China